PDFtk: Qalab lagu kala qaado faylasha PDF-ka ee terminal ka | Laga soo bilaabo Linux
El helitaanka dukumiintiyada PDF waxay noqotay wax iska caadi ahHagaag, iima oggolaanayaan inaan been sheego dhawr sano ka hor uun helitaanka dukumiinti qaab noocaan ah ayaa aad u badnaa haysashada softiweer akhriska ma ahayn wax iska caadi ah, aad ayey uga yar tahay tafatirka.
Shaqada sida caadiga ah waxaan isticmaalaa qalabka wax lagu baaro wax badan oo waxaan toos ugu diraa dukumiintiyada emailkayga. ama in xoogaa tafatir ah la sameeyo ama si fudud u dir, halkaas wax dhibaato ah kuma qabo maxaa yeelay shirkaddu waxay ka dhigeysaa dhammaan barnaamijyada aan heli karno sidaa darteed ma lihi awood aan ku daro ama ku saaro software dheeri ah.
Dhibaatadu waxay jirtaa marka ay tahay inaan ku qabto shaqada guriga, sida inbadan oo idinka mid ah ogaan doontaan in Adobe uusan u fidin qalabkiisa Linux, marka waa lagama maarmaan in la isticmaalo codsi dhinac saddexaad ah.
Halkani waa meesha codsi naga caawiya shaqooyinkan soo galaan, taas oo ka duwan kuwa kale aragtidayda waxay leedahay wax kasta oo aad u baahan tahay, maahan inaad dhahdo waa tan ugu dhammaystiran.
1 Ku saabsan PDFtk
2 Sidee loo rakibaa PDFtk Linux?
3 Sidee loo isticmaalaa PDFtk Linux?
Ku saabsan PDFtk
PDFtk waa dhamaadka hore ee maktabadda iText, PDFtk waa ilo furan iyo iskutallaab qalab waa maxay ku jihaysan wax ka qabashada dukumintiyada PDF. Codsigan ayaa noo oggolaanaya inaan wax ka qabanno dukumiintiyada PDF-ka ah iyo waxa aan sameyn karno waa kala qaybinta, isku darka, sirta, goynta, decompress, recompress iyo dayactirka.
Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu maamulo astaamaha, metadata, ama in lagu buuxiyo foomamka PDF ee FDF (Forms Data Format) ama XFDF (XML Form Data).
inta u dhaxaysa Astaamaha ugu muhiimsan waa la muujin karaa:
Isku milmaan faylal badan oo PDF ah hal
Gali bogag ka mid PDF-ga kale
Dib-u-habeyn, tirtir bogagga, ku wareeji bogagga gudaha PDF
U kala qaybi hal qoraal oo PDF ah faylal badan
Furaha sirta ah ayaa ilaaliya dukumintiga PDF
Jooji shaqeynta Priting iyo wax badan
Sidee loo rakibaa PDFtk Linux?
App Tani waxaa laga heli karaa si fudud loogu rakibo inta badan qaybinta Linux, markaa helitaankeedu waa inuusan matalin wax dhibaato ah.
Si aad ugu rakibto PDFtk Linux Waa inaan furnaa terminal oo aan ku qornaa amarrada sida waafaqsan qeybintaada Linux.
Si waxaad isticmaaleysaa Debian, Ubuntu ama qaar ka mid ah wax soo saarka kuwan waa inaad ku qortaa amarkan:
Arinta ah Arch Linux, isticmaaleyaashu ma awoodi doonaan inay ku rakibaan softiweerka ilaha muhiimka ah ee Arch Linux, marka isticmaalka AUR ayaa loo baahan yahay.
Gudaha galka isha PDFtk, waa inay kubilaabaan howsha uruurinta iyagoo fulinaya:
Marka laga hadlayo dadka isticmaala Fedora waa lagama maarmaan in la soo dejiyo xirmo taas oo lagu sameyn karo adoo garaacaya amarradan:
Sameeyay soo dejinta hadda waa inaan rakibnaa xirmooyinka hadda lagu helay:
iyadoo la adeegsanayo nooc kasta oo ka mid ah amapenSUSE codsiga aad ku rakibto:
Sidee loo isticmaalaa PDFtk Linux?
Sidaan horay u soo sheegnay, PDFTk waxay leedahay dhowr ikhtiyaar oo tafatir ah sidaa darteed isticmaalkeedu adiga ayuu kugu xiran yahay.
para isku daraan laba dukumiinti oo PDF ah oo ah PDF cusub, waxaan fulin:
O hadaad rabto inaad kubiirto dhamaan pdfs-ka kujira isla galka:
Hadda hadday rabaan inay bog ka saaraan dukumintiga, tusaale ahaan, bogga 5 oo waa inuu muujiyaa dhamaadka dukumiintiga oo leh -end
Uqeydi bogga dukumiintiga PDF bogga:
para rog dukumiinti:
Halkan waxaan ku muujineynaa in dhammaan bogagga ay u rogayaan dhanka Koonfurta, taasi waa, waxaan u weecineynaa bogagga 180 digrii haddii aad rabto inaad isku beddesho dukumintiga 90 darajo ku samee E iyo haddii aad rabto 270 digrii oo leh W.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato amarrada isticmaalka iyo tusaalooyinka qaar ee qalabkan waad booqan kartaa xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » PDFtk: Qalab lagu kala qaybiyo faylasha PDF-ka ee laga helo terminalka
Maamulaha Modem: Codsi loogu talagalay maaraynta Modem-ka Linux